Novain’ireo Piraty (Hackers) Ny Sary Tao Amin’ireo Habaky ny Miozolomana Rosiana Nandritra ny Eid · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Oktobra 2013 4:07 GMT
Satria miha-mafy ny fihetseham-po manohitra ny mpifindramonina ao Rosia taorian'ny fitroarana ara-poko tamin'ny herinandro lasa [tatitra tao amin'ny Global Voices], misy ireo olona sasany vonona hampitombo ny olana. Tamin'ny 15 Oktobra, andro nankàlazan'ireo Miozolomana rosiana ny Eid al-Adha (na Kurban-Bairam araka ny fahafantarana azy ao Rosia), tranonkala marobe an'ireo fikambanana Miozolomana no nisy nanova tamin'ny sarinà loha-kisoa notapahana mihazona Korany eo amin'ny vavany .
Nipoitra tao amin'ny habaky ny Filankevitry ny Mufti ao Rosia, ny Moskea-katedraly ao Moskoa, ary tao amin'ny habaky ny mpiasan'i Ravil Gaidutdin, lehiben'ny Filan-kevitry ny Mufti ny sary, miaraka amin'ny lahatsoratra fohy, fotoana fohy taorian'ny fanafihana DDoS. Amin'izao fotoana izao, tsy mandeha intsony ireo habaka telo ireo. Toy izao manaraka izao ny vakin'ny lahatsoratra tao:
Araka ny filazan'ilay mpandrindra ny Twitter-n'ny Tjournal [ru] ao Rosia, tao amin'ny tambajotra sosialy VKontakte, pejin'i Evgeniy Volnov no nipoiran’[ru] ireo vaovao voalohany momba ny fanafihana. Mpikambana ambony ao amin'ny fikambanana mpamelaka [ru] ao Rosia i Volnov – ny mpamelaka dia kolontsaina hafa fanaon'ireo mponina izay manao antso an-tarobia vazivazy, mandrakitra ny resaka ary mandefa izany ao amin'ny aterineto. Tsy fantatra raha tafiditra amin'ity raharaha fanafihana i Volnov. Nandritra izany, fantatra fa hitan'ny mpiasan'ny Filan-kevitry ny Mufti IT ny loharano niavian'ny fanafihana. RIA Novosti nanatsonga [ru] ny nolazain'ny Filan-kevitry ny Mufti tamin'ny fanambarana an-gazety: